RAKKOO UUMMATAA DUBBACHUU QOFTI RAKKOO UUMMATAAF FURMAATA HIN TA’U! « QEERROO
RAKKOO UUMMATAA DUBBACHUU QOFTI RAKKOO UUMMATAAF FURMAATA HIN TA’U!
March 9, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Mootoleen habashaa bara dhufaa darbaa ilmaan oromoo gidirsuu fi dararsuu hojii idilee godhatanii jiru. Jaarraa tokkoo oliif oromoon gita bittaa warra habashaa jalatti kan kufee jiru garu nama rakkina kufaatii isaa dubbatu dhabee osoo hin taane; qaamni furmaata barbaadu dhibeeti; kanneen jiranis tokkummaa dhabaniiti.
Oromootni diinaaf ergamanii oromootti diina ta’an tokko tokko yeroo garaagaraatti haala hin eegamneen yeroo isaan quuqama sabaa dubbatan argaa turre, har’allee argaa jirra. Jarreen quuqqaa sabaa dubbatan kunneen sabaaf quuqamaniitii kan jedhu yoo ilaalle garuu hedduun isaanii dubbachuu waan qabaniif qofa ykn ergamni dubbachuu waan itti kennameef qofa dubbatu. Madaa uummataa tuqatanii kulkulfachiisanii, uummata nagaa dhowwatanii ofii galanii nagaan rafu. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle bara 2014 maasterpilaaniin finfinnee akka hin raggaane, nutis ni mormina jechuun uummata waliin waan dhaabbatan fakkeessaa kan turan miseensota opdo hedduudha. Bara sana ergamtichi diinaa minaasee waldagoorgis ykn abbaa duulaa gammadaa uummatni hin barbaadu taanaan hatattamaan dhaabbata jedhee arraba isaatiin waan mi’aawu, lafa madaa sabaa tuqee dubbatee ture. Haata’u malee maasterpilaaniin finfinnee haala kamiin dhaabbate akkka jedhamne garuu namuu quba qaba. Afaaniin dubbachuun ergamtoota tplf kan ta’an opdo bu’aa buuse tokkollee hin qabu. Aarsaa uummanni oromoo waliin ka’ee, waliin duulee, waliin wareegameen dhaabbate.
Egaa yeroo garaagaraatti miseensonni opdo waan uummatni barbaadu dubbachuun jaallatamuuf ifaaju. Bakkoota hedduutti daandii isiniif baasna, ibsa galcjina, tajaajila bishaan dhugaatii ga’aa argattu, sichi hin rakkattan jechuun afaaniin ololaa oolu. Har’as garuu rakkoo uummatni bal’aan keessa jiru akkuma jirutti jira. Gamoowwan , dhaabbilee tajaajila garaagaraa kennan hedduun uummata sossobuuf eegalamanii osoo ijaarsi isaanii hin xumuramin dulloomaa jiru.
Kana qofaa miti jechoota sabboontotaa illee fayyadamuun yeroo isaan itti uummata afaan faajjessuuf yaalan xiqqoo miti. Obbo lammaa magarsaa ajjeechaa deettii ilmaan oromoo irratti guyyaa irreechaa raawwateen wal qabatee manneen barnootaa hedduun dhaabbuchuu irratti akkas jedhee ture. “ jeneraal taaddasaa birruu dhalootni barate gaaffii mirgasaa gaafata jedhe, kanaaf barattoonni keenya barnootatti deebi’uu qabdu” jechuun afaan guutee jecha goota kanaa fayyadamee ture. Eeyyeen dhugaadha dhalootni barate gaaffii mirgaa gaafata. Obbo lammaan garuu dhuguma oromoon baratee akka gaaffii mirgasaa gaafatu fedhee osoo ta’ee har’a barattoonni oromoo gaaffii mirgaa, gaaffii abbaa biyyummaa waan gaafataniif qofa hin ajjeefaman, hin hidhaman, biyya irraas hin ari’aman ture. Kun itti fakkeessiidha. Afaaniin qofa uummata bira dhaabbachuu. Afaaniin dubbachuun qofti garuu furmaata ta’ee hin beeku; hin ta’us.
Amma immoo obbo lammaan dhiyeenya kana wal ga’ii magaalaa bishooftuu irratti “ lafti keenya taakkuun tokko hin fudhatamtu” jechuun dubbatee ture.
Dhuguma dhimmi lafa oromoo isa quuqeetuu? Dhuguma waa’een daangaa oromoo isa yaachisee jennaanii? Silaammaa dhugumaan ilmaan oromoo daangaarra jiran har’a weerara liyyuu poolisiitiin hin gidirfaman. Lafa isaaniis hin saamaman ture. Har’a oromoo meeqatu guyya guyyaan daangaa irratti wareegamaa jira. Nama afaaniin isaan cina dhaabbatu dhabanii osoo hin taane nama gochaan aantummaa saba isaaf qabu dhabaniitu aarsaa gurguddoo baasaa jiru.
Dhiheenya kanas walga’ii caffee oromiyaa irratti gaaffileen ka’aa turani. Rakkoo uummata oromoo irratti waraanni liyyuu haayilii fi makkalaakayaa itoophiyaa waliin ta’uun raawwatan ifatti dubbatamee ture. Osoo afaaniin dubbachuun qofti furmaata ta’ee gaaffiin caffee oromiyaa keessatti ka’e sun furmaata hin ta’u turee?
Walumaa galatti afaaniin aantummaa agarsiisuu qofti faayidaa hin qabu. Afaaniin rakkoo uummataa dubbachuu qofti rakkoo uummataafis fala ta’uu hin danda’u. kanneen dhuguman quuqama qaban, namoota dhuunfaas haa ta’u, jaarmiyaaleen siyaasaa, akkasumas kanneen diina waliin hiriiranii osoo jiranii quuqama qabna jedhanii afaaniin dubbatan martuu aantummaa isaanii hojiin haa mul’isaniin dhaamsa kooti.
« Matakkal Naannoo Gaalessaa fi Ganda Qorqaa Keessaa Oromoonni Hedduminaan Qabamaanii Ma’ikelaawwii fi Gariin Ammoo Mana Hidhaa Asotti Guuramaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.
SBO Bitootessa 10,2017. Oduu fi gaaffii fi deebii miseensa poolisa federaalaa kan ture dargaggoo Caalaa Muddee waliin godhame kutaa 2ffaa »
Yoomille Hayyu says:
Akka yaada kootti haalonni yaroo amma wayaneen bifa jijjirtee karaa weerara lafaatin lafa teenya saama umata keenya guyyarran guyyatti lafarra fixaa jirtu kana umanni Oromoo keeysattu activistoonni , hayyonni akkasuma diyasforaan Oromoo Akka dhimma ijoo tokootti xiyye fanna itti kennanii waan itti dhumamaa jiran hin fakkaatu, lafti iratti cichinee tokummaan kaane irattiis wareegamnni cimaan kafalamee hamma tokko saaminsarra oolchine “master planin finfinne” fi lafatti amma maqaa Liyuu polisii somaleetin wayaneen nurra saamsisaa jirtu tuni garaagarumma qabu? lubbuun kaleessa dirre gubatti bahaa turtee fi tan amma naanno daanga kanaratti guyya guyyaan bahaa jirtu tuniho garagara? yaa Oromoo humnna fi xiyefanna keenya guutumatti Kara tokotti walitti sasabanne fuulefanna qabsoo keenyatiis faaga tokoratti yoo hin deefanne tahe kufaati waggoota ykn jaarra dabre kufnne caala kufaati keeysa bahuu hin dandeenyetti deema Akka jirru hubachuutu nurra jiraata ja’een yaada.
horaa bulaa galatooma , jabaadha waliin jirra.